शेयर बजारमा ४.२३ अङ्क वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर शेयर बजारमा ४.२३ अङ्क वृद्धि
शेयर बजारमा ४.२३ अङ्क वृद्धि
मङ्सिर ८‚ काठमाडौं । गत साता परिसूचक सुधारिएको देखियो । साथै‚ कारोबार रकम र बजार पूँजीकरणमा बृद्धि भएको थियो । पछिल्लो समयमा कम्पनीहरूले लाभांश दिने र हकप्रद जारी गर्ने खबरले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढेको विश्लेषण गरिएको छ । सोही कारण कारोबारमा सुधार भएको हो । साताको पहिलो दुई दिन घटेको बजार पछिल्लो ३ दिन भने उकालो लागेको थियो । अघिल्लो साताको अन्तिम दिनको तुलनामा गत आवको अन्तिम दिन कारोबार रकममा ५२ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात्‌ रू. २३ करोड ५२ लाख घटेको थियो भने कुल बजार पूँजीकरणमा रू. ७ अर्ब १३ करोडको कमी देखिएको थियो ।
साताको परिसूचक हेर्दा बजार आगामी दिनमा बढेमा पहिलो प्रतिरोधात्मक विन्दु १ हजार ५ सय ३ रहेको छ भने दोश्रो विन्दु १ हजार ५ सय १३ रहेको छ । त्यस्तै‚ बजार घटेमा पहिलो टेवा विन्दु १ हजार ४ सय ७५ र दोश्रो टेवा १ हजार ४ सय ५६ मा पाउने देखिन्छ । साताको मैनबत्ती चित्र हेर्दा अन्तिम दिनको सेतो मारुबोजू आकृति बनाएको छ । सो साताको अन्तिम दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४६ दशमलव शून्य ४ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्रीचाप सामान्य रहेको देखाउँछ ।
गत साता नेप्से परिसूचक ४ दशमलव २३ अङ्क बढेको थियो । अघिल्लो साताको अन्तिम दिन १ हजार ४ सय ८९ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक गत साताको अन्तिम व्यापार दिन बढेर १ हजार ४ सय ९३ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेको हो । तर‚ गत साताको पहिलो व्यापार दिनको तुलनामा अन्तिम दिन भने नेप्से परिसूचक १७ दशमलव ५७ अङ्कले बढेको हो । गत साता कारोबारमा आएका सबै समूहहरूको परिसूचक बढेको थियो ।
गत साता २३ हजार ४ सय ९९ कारोबारबाट १ सय ८५ कम्पनीहरूको ५४ लाख ७४ हजार ३ सय कित्ता शेयरह खरीद विक्री भए । जसबाट रू. २ अर्ब २३ करोड ७७ लाख ५३ हजार बरोबार रकम परिचालित भयो । यो रकम अघिल्लो साताको तुलनामा २३ दशमलव ३८ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो साता १ सय ८० कम्पनीहरूको २९ हजार ३ सय ३० कारोबारबाट ६८ लाख २७ हजार ६ सय ८० कित्ता शेयर खरीद विक्री भएका थिए । जसबाट रू. २ अर्ब ९२ करोड ५ लाख १५ हजार बराबरको कारोबार भएको थियो ।
बैङ्किङ समूहको परिसूचक १६ दशमलव ८२ अङ्क‚ विकास बैङ्कको २० दशमलव ४८ अङ्क‚ वित्त कम्पनीको २ दशमलव ८७ अङ्क र लघुवित्तको २३ दशमलव ५२ अङ्क बढेको थियो । साथै‚ होटल समूहको परिसूचक ४६ दशमलव ३९ अङ्क‚ जलविद्युतको ५९ दशमलव ४२ अङ्क र बीमाको ६७ दशमलव ७३ अङ्क बढेको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६३ अङ्क‚ व्यापारको शून्य दशमलव ६८ अङ्क र ‘अन्य’ समूहको १ दशमलव ४४ अङ्क बढेको थियो ।
सातामा ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा अन्तिम दिन ३ दशमलव ८३ अङ्कले बढेर ३ सय १४ दशमलव ४३ अङ्क पुगेको छ । त्यसैगरी‚ फ्लोट इन्डेक्स पहिलो व्यापार दिनको तुलनामा अन्तिम दिन १ दशमलव ३८ अङ्कले बढेेेर १ सय ७ दशमलव २९ अङ्कमा पुगेको हो ।
सो साता कारोबार रकमको आधारमा साना किसान विकास बैङ्क लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । यस विकास बैङ्कले गत साता रू. २१ करोड ९९ लाख २० हजार बराबरको शेयर कारोबार गरेको थियो । कारोबार सङ्ख्याको आधारमा एभरेष्ट बैङ्क लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो वाणिज्य बैङ्कको १ हजार ४ सय ५० ओटा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी‚ कारोबार भएको शेयर सङ्ख्याका आधार सिभिल बैङ्क अग्रस्थानमा रहेको छ । यस बैङ्कको २ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर खरीद विक्री भएको थियो ।
३ चैत्र २०७४, शनिबार १२:३८